မြန်မာကို လုံခြုံရေး အကူအညီ ကန့်သတ်မည့် အမေရိကန် ဥပဒေကြမ်း သမ္မတရုံး ဝေဖန်နမ့်ခမ်းတွင် ဆီလီကာ မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းရန် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတပ်မတော် ထိပ်ပိုင်း ရာထူးတချို့ အပြောင်းအလဲ လုပ်တရုတ် ၀န်ထမ်းများနှင့် ရန်ဖြစ်သော မြန်မာများ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရအသုံးချခံ ယန္တရားနဲ့ ကလေးတယောက်ရဲ့ ဘ၀အိပ်မက်
ohnmar November 17, 2012 - 11:15 am ရခိုင်တွေစစ်တပ်ကိုအများကြီးရှိစေချင်တော့တွေ့ပြီပေါ့ဒုက္ခလှလှလေ။ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကစစ်တပ်ဆိုတာသူများတိုင်းပြည်ကစစ်တပ်တွေလိုမဟုတ်ဘူးအကြီးစားဓါးပြတွေ။
Reply Nyein November 17, 2012 - 10:30 pm မြေစာရင်းကိုလိမ်ချင်တိုင်းလိမ်ပြီး လူပါးဝတာ။ မြေပိုင်တယ်ဆိုတိုင်း မြေပေါ်စိုက်ထားတာကို ပေါက်တူးတစ်ချက်မှဝင်မပေါက်ဘဲ သိမ်းစရာလား။ တပ်ရင်းမှူးမဟုတ်ဘူး ဓားပြဗိုလ်။
Reply ဖဖီ November 18, 2012 - 9:37 am စစ်တပ်ပိုင်မြေလို့ပြောနိုင်ဘို့လွတ်တေါ်ထဲကအစိမ်းရောင်များရှေ့နေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
Reply မင်းကြီးညို November 18, 2012 - 11:36 pm စစ်ဘက်နှင့်အရပ်ဘက် ဆက်ဆံရေး ပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါဗျာ။ ယခုလိုပဋ္ဋိပက္ခ
Reply ko myatkyi November 20, 2012 - 12:18 pm စစ်သားဆိုတာ စစ်တိုက်ဖို့ဘဲတာဝန်ရှိတယ် နိုင်ငံတော်ကလစာရိက္ခာလုံလောက်အောင်ပေးထားရင်တပ်ပိုင်လယ်ဆိုတာမရှိစေရဘူး အခုတော့စစ်သားက လယ်စိုက်ရ မိန်မတွေလည်းလယ်စိုက်ရနဲ့ တခြားနိုင်ငံတပ်မတော်တွေမှာလုပ်စရာမလိုပါဘူး ဘာတဲ့ တပ်များစွမ်းရည်တိုးတက်ရေး ပေါင်းစည်းလယ်ယာတို့ လစာတစ်လစာနဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုအလုပ်ခိုင်းတယ် ပြီတော့လူမွှေးပြောင်းအောင်လည်းမထားနိုင်ဘူး မလုပ်ချင်တော့လိုထွက်ချင်လည်းပေးမထွက်ဘူးစစ်သားတွေကို နားလည်းပေးကြပါ သူတို့မှာဒုက္ခနဲ့ပါ
Reply kopouk November 22, 2012 - 5:52 am ဒီဖြစ်စဉ်သည် သဘော၇ိုးဖြစ်စဉ်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ. တမင်၇ည်၇ွယ်ချက်၇ှိ၇ှိ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်.မိမိကိုယ်တိုင် စိုစ်က်ပျိုးထားခြင်းမ၇ှိသော စပါးခင်းကို ၇ိတ်သိမ်းယူငှင်ခြင်းမှာ အင်အတန် ၇ုပ်ဆိုး ပြီး အင်မတန်မှ အောက်တန်း ကျ တဲ့ လုပ်၇ပ်တစ်ုခုဖြစ်နေပါသည်.ဒီလို ပြသနာတွေ တက်နေတဲ့ ၇ခိုင်ဒေသမှာ စစ်တပ်အနေနဲ့ ပိုမို ဆင်ခြင်၇မှာ ဖြစ်ပါသည်. တမင် ပြသနာကို ဖြစ်အေင် ခွင် ဖန်တီးနေပုံ၇ပါသည်. စစ်တပ်သည် အထက် ကအမိန့် ပေးတာ ကို လုပ်၇သည့် အတွက် ဒီကိစ္စ တွင်လည်း အထက်က အမိန့်ပေး စေခိုင်းသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆ၇ပါသည်.ဆိုတော့ ကာ စစ်တပ် အနေနဲ့ လူထုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း မ၇ှိသည့်အပြင် ၀မ်းစာ စပါးကိုပါ လုယက် ယူငှင် ပြီး ဒုက္ခ ပေးနေသည် ကို ကြည့်ခြင်းအား ဖြ့င့် စစ်တပ်အနေဖြ့င့် ၇ခိုင်ပြသာနတွင် ဘယ်လို ကိုင်တွယ်နေသည် ဘယ်လို ဖြေ၇ှင်းနေသည် ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ နေ၇ပါသည်.